Puntland oo sheegtay in ay $1 milyan ka heshay Dowladda Federaalka Soomaaliya si loogu caawiyo Qardho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in ay $1 milyan ka heshay Dowladda Federaalka Soomaaliya si loogu caawiyo Qardho
April 30, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi. [Sawir Hore]
Qardho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hal milyan oo dollar ugu deeqday dadaalada loogu gurmanayo magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Qardho.
Wasiirka Maaliyada Dowladda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa shir jaraaid oo uu ku qabtay Qardho ka sheegay in lacagtaas ka timid dowladda dhexe.
Sidoo kale waxa uu sheegay in gargaar ay iska uruuriyeen dadka reer Puntland ee kunool magaalooyinka waa-weyn sida Boosaaso iyo Garoowe uu soo gaaray Qardho.
January 1, 2020 Sicirka caanaha oo hoos u dhacay deegaanada Puntland